hewannibella@gmail.com	Uncategorized	Leave a comment 21st Nov 2018
Gowwoonni garaa isaaniitti ‘Waaqayyo hin jiru” in jedhu; faarfaan 14:1-2
Abbooti Keenya yeroo baay’ee yoo nuu eebbisaan hubannoo sif haa kennuu jedhuu!.
Jechii kun waan xiqoo fakkataa isaan garuu waan jedheenif qabu.
Addunyaa kan keessaa yoo caalisee illaale ofumaaf nama soba. soban suns akka sobee fi akka sobaa taa’ee Ni bekkaa garuu hundaa duraa ofumaa deebii’ee amanee sana qofa miti falaasama isaa egaalee. Ofumaa sobe ofumaa amanee jechii kun baay’ee cimaa dha.
,,Nama Guyyaa rafetti guyyaa dukkaa itti ta’ee qofaa malee #haadha durboo maariyaam idoo guddaa qabachuu ishee wangeelaa mee kan akkamiin nuuti himu?
Durboo maariyaam #Araarsituu akka dhalaa nama qofaa miti kan ragaa bahee Gooftaan keenyaa ajaa’iba jalqabaa kan raawwate kadhannaa isheetinii: Mana dookimasitti yemmuu wayniin dhumutti isheetu kadhateef, Gooftaaniskan ati jette kana yoo siif hin goone maal naraa qabdaree(maal wal irraa qabnaree kan kana walii hin goone jechuudha) jedhee bishaanicha gara Wayniitti jijjiireera. Kanaan walii galan Isheenis isa dhagahaa jette.
Abbooti Raajoota Xumuras Raaga, iccitti raajii kan taatee duukaa bu’ootaafis ka’umsa lallaba kan haadha waaqayyootii akkamiiti kabajaa isheef hin taanee?
Kan raagdonni ( raajonni) raagan, kan isaan boodarra waan dhufu dursanii arguudhaan Kiristoos akka dhalatu;dhala namaas cubbuu ittiin qabamee jiru; garbummaa seexanaa jalaa baasee bilisummaa akka kennuuf kan dubbachaa turan kan raawwatame foonii fi lubbuu dubroo Maariyaam irraa fudhateenidha. Yemmu dhalli namaa hundi bittaa cubbuu jala turetti qulqullummaan abbootii raajotaa bittaa cubbuu dhaalaan darbaa ture jalaa waan isaan baasuu dadhabeef “ Hundi keenyi harfoofneerra;qulqullummaan keenyi hundi akka uffata abaarsaa ta’eera” ( Isaa 64:6) jechaa yemmu turanitti beekumsa Waaqayyootiin Waaqayyo Uumaan dhala namaa fayyisuuf jecha cubbuu Addaam isa dhala irraa gara dhalaatti daddarbaa ture irraa Ishee eegee;
Kanaaf nuttis haadha keenya jedhuun. Kanas immoo gaarummaa fi haadhumma ishee waan beekuuf warra isatti amanan hundaaf haadha akka taatuuf fannoo jalatti karaa Yohannisiin kan nuuf kenne Gooftaa keenya Iyyasuus Kirstoosidha.(Yoh 19:27)
Araaraasiitu taa’uu isheef akka ilma ishee maddii dhaabattu,Rajaa Daawit akkas jedhee faarfateera “Uffata warqeen miidhagdee haguugamtee mootittiin mirga kee ni dhaabatti, mucaa koo dhaga’i ilaalis, gurra kees natti qabi .Gosa keessaa mana abbaa kees irraanfadhu; mootiin miidhagina kee jaalateera, inni gooftaa keeti”(Farfannaa 44:9)
dubbiin kuni kan akkasuman dubbatamee hafu miti. Kanaaf abboottii Keenya Yeroo dubaatan gooftaa Keenya namni tokkollee du’aa ka’uu hin argin jechuun dubbatiin.
Gooftaa booda kan osoo namni tokkollee du’aa ka’uu hin argin du’aa kaate ishee dha. Kunis Iyyaruusalem ishee samii keessa jirti. Taabota Door kan Iyyeruusalem samii irra jirtu jedhee kan galateeffate Aabbaa Hiriyaaqos kanafi dha.
Haadhas dubras kan tahe ishee qofadha. Dubrummaan ishees kan bara abaraati. Yoosefitti kaadhimamuun ishee akka ishee eeguf malee akka dhirsa tahuuf miti. Isheen osoo gooftaa hin dahin dura dubra, erga deessee boodas durba, durba dubrummaan Hafuura Qulqulluun deesse, hanga dhumaattis durba taate dha. Dhagnaanis yaadanis dubra, kana yemmuu jennu namni tarii dubartiin fooniin yoo dubra taate, deebite yaadan kan dubra tahu hin jiru, isheen garuu yaadanillee raawwattee dubra dha.Hisq 44:1Waa’ee dubaroo Maariyaamii dubbatanii xumuruuf ni rakkisa. Dubbiiwwan raagaa hedduun akka soorgootti fi sookoo waa’ee ishee of keessaa qabu. Addaam irraa eegalee hanga dhaloota isa dhumaatti kan ishee hin abdanne hin jiru. Namni cubbuun isaa baay’ee dha, waa hedduunis ni moo’ama, isheen garuu cubbuu moo’attee,qulqulluus taatee ibidda gadaamessa isheetti baatte, kanaaf gama isheetiin jabina arganna. Gootfaa Keenyaa Iyyasus kiristoota ilma Waalii nu Araarsitee Galatni Waaqayyoof Galatni Deessuu haadha isaaf Durboo Maariyaamiif qulqullummaan Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kabajama Fannoo Gooftaaf kan dhiigni Waaqumma irratti kan dhangala’eef ,baraa hanga baraatti. Ameen
hewannibella@gmail.com	Uncategorized	Leave a comment 15th Nov 2018 18th Nov 2018 2 Minutes